Ikhaya / izesekeli / Izinto Zokugeza / I-WOWOW Brushed Gold Towel Ring
Ukuvela kwe-Classic, ukugcina isikhala: izindandatho zokugeza izandla zokugezela zivumela indandatho ukuba ihlale kuma-engele owuthandayo, gcina ibanga lakho, uzuze inzuzo.
I-304 i-premium-grade iron yensimbi: ukugeza izinkuni ezungeze ithawula indandatho, eyakhiwe ngensimbi engagqwali ukuvikela ngokumelene nokugqwala nokugqwala
Ithawula lesandla izindandatho zegolide brunch nickel 4020101BGD: ephelele ihlinzeka ukubukeka okusansimbi okuthambile kwegolide; indandatho yethawula ihlinzeka ngesitayela esilula esisebenza njengophimbo olucashile ukufanisa umhlobiso wakho.
Yenza isethingi elihamba kalula nelinethezekile egumbini lakho lokugezela ngalesi sengezo sezinto zokugezela zangasese.
Le indandatho yethawula isiza ukugcina amathawula asondelene ngaphakathi kwethafa lethusi elinamandla le-champagne.
Uma usebenzisa isigqebhezana sesaphulelo sika-10%, intengo ishibhile kune-Amazon!
SKU: 4020101BGD Categories: Izinto Zokugeza, izesekeli Tags: Igolide elixubile, Circle, rings